အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( ဧပြီ ၂၀၁၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( ဧပြီ ၂၀၁၃)
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( ဧပြီ ၂၀၁၃)
Posted by kai on Apr 3, 2013 in Editor's Notes | 24 comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသန်း ၆၀ရှိသည်ထား ထိုအထဲရှိ ၈၅ရာခိုင်နှုန်းဟုဆိုကြသော ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တို့ အထူးစွဲကိုင်ပြောဆိုကြသော ဆောင်ပုဒ်ကြွေးကျော်သံဖြစ်သည်။
“အမျိုး”သည် မြန်မာအမျိုးသားမြန်မာ့ဇာတိနွယ်တို့ကိုရည်ညွှန်း၍ “ဘာသာ”သည် ဗမာ ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်။
“သာသနာ”ဟူသည်ကား မြန်မာအများစု ကိုးကွယ်ရာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာဖြစ်၏။
မြန်မာတို့သည် ယခုတည်နေသောမြေဧရိယာ အကျယ် ၂၆၁၂၂၇ စတုရန်းမိုင်တွင် မှီတင်း နေထိုင်ခဲ့သော မူရင်းလူမျိုးမဟုတ်ပါ။ မူရင်းဌာနေသားများ၊ မွန်-ခမာ(မွန်)၊ တိဘက်တို-ဘားမင်း(ပျူ၊ကမ်းယံ၊သက်)၊ တိုင်(ရှမ်း) စသည့်ဇာတိနွယ်ပေါင်းစုံတို့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရွှေ့ပြောင်းလာကြရင်းသွေးနှောရောယှက် ပေါင်းဆက်သွားသူများသာဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းရှည်၍ ယဉ်ကျေးမှုကြာသော ချိုင်းနားနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီး၂ခု၊လူမျိုးကြီး၂နွယ်ကြားရှိမြန်မာသည် သီးသန့်မျိုးနွယ်ဟုဆိုပါလျှင်ယုတ္တိမတန် အခြေခံလော့ဂျစ်တွက်နည်းတို့မှ လွတ်နေသည်သာဖြစ်ရမည်။
သို့ဆိုသော် တရားဝင်ကြေငြာထားသော လူမျိုးစုပေါင်း ၁၃၅ခုနှင့်တကွ ဤမြေ၊ ဤလေ၊ ဤဧရာဝတီတွင် မှီတည်မွေးဖွားကြီးပြင်းလာသူတိုင်း မြန်မာဖြစ်ရ / ဖြစ်သင့်ပါသည်။
အရင်ရောက်နှင့်သူ နောက်လာသူ သာလျှင်ကွဲသော ယူအက်စ်(U.S.)ကဲ့သို့ လူမျိုးဇာတိနွယ်ရောသမမွှေထားသူတို့သာလျှင်ရှိနေကြသည်ဆိုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာတို့၏ ဘာသာဗေဒသည် ဗြာဟ္မီစာမှ လာသည်။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်စ မြစေတီကျောက်စာတွင် ပါဠိ၊ ဗမာ၊ ပျူ၊ မွန်လေးဘာသာ အက္ခရာဖြင့် ကမ္ဗည်းထိုးထားခဲ့ပေရာ ထိုခေတ်အချိန်က အင်အားကြီးလူမျိုးကြီးလေးရပ်ရှိခဲ့သည်ဟု မှန်းယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ထောင်ချီအတွင်း အခြားမြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့တွင် ဘာသာစကား၊စာပေအရေးအသားကိုယ်ပိုင်စီငှရှိကြပါသည်။ သို့သော် အခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတို့အားအသိအမှတ်မပြု(သို့)ပြုခြင်းနည်းသည့်သဘောမြင်ကြရသည်။ အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသား ဗမာက ဗမာဘာသာစကား(ဗမာ -ISO 639-3 : mya)ကို အထူးပင်တွန်းတင်ထားလေသည်။
ကမ္ဘာ့ဥပဒေသအားဖြင့်မူ ဘာသာ ဗေဒ၊စာပေ၊နိုင်ငံရေးတို့သည် တက္ကသိုလ်မြေမှအခြေတည် ဖွင့်လှစ်သင့်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဟူသည် အဌာရသတို့တပြိုင်နက်ဆည်းပူးရာဖြစ်သင့်ဖြစ်ရပါမည်။
သို့ဖြင့်၍သာ မြန်မာစာပေ ဘာသာစကားတို့ သွေးသစ်မျိုးဆက်များမှတဆင့် ခေတ်နှင့်အညီ ညှိ၍လိုက်ကာ တိုးတက်လာရမည့်ဟန်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့အစောဆုံးသာသနာသည် မြန်မာတို့နှင့်အိမ်နီးချင်းကပ်လျှက်ရှိသော အိန္ဒိယ၏ ဟိန္ဒူသာသနာဖြစ်သည်ဆိုကြသည်။ ထိုနောက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ(ဘီစီ ၅၀၀ကျော်)၊ ခရစ်ယန်သာသနာ၊ အစ္စလမ်သာသနာ(အေဒီ၆၀၀ကျော်)ဟူ၍ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများကို အစဉ်ကောက်နိုင်ပါသည်။
ဒေသန္တရရပ်တည်မှုအားဖြင့် မြန်မာတို့၏အစောဆုံးယဉ်ကျေးမှုရှိရာ ရခိုင်၊မွန်၊သရေခေတ္တရာပျူတို့၏ အုပ်ကျိုးကျောက်စ၊မြေအိုးတို့မှသမိုင်းခြေရာခံလိုက်ပါမူ ဟိန္ဒူသာသနာသည် မြန်မာတို့၏ အစောဆုံးသာသနာဖြစ်နိုင်ကောင်းပါသည်။
ထိုနောက် ပုဂံခေတ်၏ အရည်းကြီးသာသနာ( မဟာယာနဟု ယူဆမိသည်) ထိုထိုနောက် မွန်တို့၏ သထုံမှ ထေရ၀ါဒတို့ဖြစ်လောက်သည်။ ပေါ်တူဂီ၊အာရပ်တို့မှဆင့် မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်တွင် အစ္စလမ် သာသနာရောက်လာနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့အုပ်ချုပ်ချိန်တွင်မှခရစ်ယန်သာသနာသည် တောင်ပေါ်ဒေသပြည်နယ်များသို့ တိုးဝင်သွားဟန်ရှိလေသည်။
ရှေးအိန္ဒိယ၏အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူ ဘုရင်များသည် ဟူးရား၊ပုဏ္ဏား(ဗြာဟ္မဏ)တို့၏အကြံဥာဏ်ရယူသည့်ထုံးရှိပေရာ ဟိန္ဒူသာသနာတွင် နိုင်ငံရေးရောယှက်နေသည်ကို ထင်ရှားစွာသိနိုင်သည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ရောဟိနီမြစ်ရေလုရင်းစစ်ဖြစ်လု နှစ်ပြည်ထောင်ကြားဝင်၍ဖြေဖျန်မှုပြုဖူးသည်။
ဂဏစနစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်သော ၀ဇ္ဇီမင်းတို့အတွက် အပရိဟာနိယဓမ္မ(တိုင်းပြည်တိုးတက်ကြောင်း အခြေခံလိုအပ်ချက်ခုနှစ်မျိုး)ကို သင်ပြခဲ့ဖူးသည်။ အမျိုးသကျသာကီဝင်တို့အား မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ရန်လာသော ၀ိဋဋူပ၏စစ်တပ်ကြီး
အား တားဆီးဖူးသည်။ လူသားတို့အားလည်း လောကီရေးနှင့်ဆိုင်သော တရားညွှန်ကြားချက်များစွာ ဟောကြားခဲ့ဖူးပေသည်။
ခရစ်တော်အားကားစင်တင်သတ်ပြီးနောက် ခရစ်ယန်တို့ကိုနှိပ်ကွပ်ခဲ့သော ရောမ အင်ပါယာသည် ခရစ်တော်လွန်ပြီးနောက်တွင်မှနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးပေါင်းစည်းခြင်သို့ရောက်ခဲ့သည်ဟု သမိုင်းနိုင်ငံရေးဆရာတို့က ဆိုကြသည်။
ကမ္ဘာ့ဒုတိယကိုးကွယ်သူအများဆုံးအစ္စလမ်သာသနာတွင်လည်း တမန်တော်မိုဟာမက်သည် စစ်ရေးနှင့်အတူတိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုသိမ်းသွင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုရင်း အင်ပါယာတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ကိုရမ်ကျမ်းကိုပင် နိုင်ငံ၏အခြေခံဥပဒေကျမ်းကဲ့သို့ပြုခဲ့ကြပေသည်။
မြန်မာပြည်တွင်လည်း သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်တို့သည် မင်းဆရာတော်ကြီးများနှင့်အတူတကွ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးနု၏ ဗုဒ္ဓသာသနာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဌာန်းရန်ကြိုးပမ်းမှု၊ ၁၉၈၀ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃာ့အစည်းအဝေးမှစတည်ထောင်သော “မဟန”နှင့် မဆလ၊ စစ်အစိုးရဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝန်ကြီးများ၏ နိုင်ငံရေးရာကိစ္စရပ်များအား မဟနသို့ဝပ်တွားတင်လျှောက်မှုများဖြင့် သာသနာရေးသည်နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ တရားစီရင်ရေးအာဏာ၊ ဥပဒေပြုအာဏာတို့တွင် ထဲဝင်ပတ်သက်နေသည်တို့ရှိပါသည်။
ဤသူ၏အယူအဆဆိုရပါလျှင် ရဟန်းတို့သည် လူသားတို့အားဆုံးမ သွန်သင်ပြုပြင်ပေးရမည့်တာဝန်ရှိသည့်အပြင် ဆွမ်းကွမ်းကျောင်းကိစ္စတို့၌ တကာ-ဆရာတိုက်ရိုက်ပါတ်သက်နေသဖြင့် နိုင်ငံရေးကို
သို့သော် ရဟန်းများ နိုင်ငံရေးလုပ်ရာတွင် “အနန္တော အနန္တ”ဂိုဏ်းဝင်ဟူ၍မခွဲ အခြားလူထုသားများကဲသို့ လူသားချင်းတန်းတူဆက်ဆံမှုကိုရှိသင့်သည်ဖြစ်၍ မိမိအတ္တအကျိုးစီပွားဖြစ်သော လာဘ်-လာဘ ကျော်ဇောမှုတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါက နိုင်ငံရေး လုပ်ရန်မသင့်ဟုဆိုချင်သည်။
ရှေးနှစ် ၁၀၀၀ကျော်က ပျူတို့သည် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်ချိန် အနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် မျိုးပျောက်လုနေပြီဟု ယူဆရပါသည်။ ပုဂံမင်းအား “ပျူတစ်သိန်းမင်း”ဟုခေါ်ဝေါ်မှတ်သားချက်ရှိပေရာ ပျူတို့ရှိနေသေးသည်မှတ်ယူရမည်။ သို့သော်ပျူသည်မြန်မာလော၊ သွေးနှောမြိုခံရသလော၊ ပြုတ်သလော၊ ဖြုတ်ခံရသလောဟုသမိုင်းမသေချာပဲ ပျူတို့မျိုးပျောက်ခဲ့ပါ၏။
သမိုင်းပညာရှင်ကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းက မြန်မာတို့သည် စစ်ကိုခုံမင်သော စစ်မျိုးနွယ်များဟုရေးဖူးသည်။ မြန်မာတို့၏ ရာဇ၀င်သမိုင်းတွင် တခြိမ်းခြိမ်းသော ပြည်တွင်းစစ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတို့ဖြင့်လွှမ်းထားသည်ကို ပဒေသရာဇ်သက်ဦးဆံပိုင်၊ ကိုလိုနီ၊ ဒီမိုကရေစီ၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ စစ်အာဏာရှင်၊ စနစ်မျိုးစုံတို့တွင် ဖတ်ရလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သောရာစုနှစ်မှစ၍လည်း ကုလား-မြန်မာရိုက်ပွဲ၊ တရုတ်-မြန်မာအဓိကရုဏ်း၊ ကချင်-မြန်မာ၊ကရင်-မြန်မာ၊ ရှမ်း-ဗမာ၊ ကွန်မြူနစ်-ဆိုရှယ်လစ် ပြည်တွင်းစစ် စသဖြင့်မဆုံးနိုင်သော လူမျိုးရေးစစ်မီးများတောက်လောင်ခဲ့ တောက်လောင်နေဆဲ တောက်လောင်ဦးမည့်သဘောတို့မြင်ရပေသည်။
မြှင့်မြှောက်ပေး၍ လူမျိုးရေးအမုန်းတရား ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တရားတို့ပြုရန်လွယ်ပါသည်။
အမျိုးဘာသာသာသနာ ခေါင်းစဉ်တပ်တွန်းတင်မြောက်ပေးခြင်းကို မူလတန်းအခြေခံပညာရေးတွင် ပြုကြပါမူအဆိုပါကလေးငယ်များအရွယ်ရောက်အသိဥာဏ်ရင့်ဝင်ချိန်တွင် ပြင်ဆင်ရခက်သော ငရဲမကြောက်သည့်အစွန်းများသို့တွန်းပို့ရောက်သွားနိုင်သည့်သဘောရှိ၏။
ကမ္ဘာကျယ်အသိဥာဏ်ဗဟုသုတများများရှိဖို့ မြန်မာပြည်၏ မူလတန်းပညာရေးကို အမျိုးဘာသာသာသနာ ခေါင်းစဉ်တပ်ခြင်းတို့မှလွတ်ကင်းခြင်တို့ပြုသင့်သည်။
ယူအက်စ်(U.S.)တွင် လူမျိုးရေးအမုန်းတရားတို့ရှိခဲ့ဖူးသည်။ အသားအရောင်၊ ကျွန်စနစ်တို့ကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးများဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ အဖြူအမည်း မြင့်မြတ်/နိမ့်ကျခွဲမှုကြောင့် KKK (Ku Klux Klan)ကဲ့သို့အစွန်းရောက်အဖွဲ့အ
စည်းများ ပေါ်လာဖူးသည်။ “မာတင်လူသာကင်း”ကဲ့သို့ခေါင်းဆောင်လုပ်ကြံခံခဲ့ရဖူးသည်။ လူလူချင်းခွဲခြားနှိမ်ချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများစွာတို့ အကြိမ်ထပ်ထပ် ပြဌာန်းခဲ့ရဖူးပါသည်။
မြန်မာပြည်ကဲ့သို့ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာမျိုးစုံရောယှက်နေသူတို့တိုင်းပြည်တွင် အမျိုးဘာသာသာသနာဟူသည် လားလိုရာဆွဲယူခြင်းဖြင့်အစွန်းရောက်စိတ်တို့ကိုသာ ဖြစ်တည်မွေးဖွားစေ
နောင်လာမည့် မြန်မာမျိုးဆက်များ၏အနာဂတ်ကောင်းပါရန် မြန်မာပြည်တွင် မုန်းတီးခွဲခြားနှိမ်ချမှုပြုသူတို့အားနှိပ်ကွပ်အရေးယူသောဥပဒေတို့အမြန်ပြဌာန်းရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ယခုရောက်လာမည့် မြန်မာနှစ်သစ်မှသည် တရားမျှတ လွတ်လပ်သည့် ခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်သောမြန်မာပြည်သစ်သို့ ရည်ရွယ်လှမ်းကြလျှောက်ကြနိုင်ပါစေကုန်သတည်း။
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာ ဧပြီလ ၂၀၁၃ ထုတ်၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာပြီး comment တွေကော post ကော သေချာပြန်ဖတ်အုန်းမယ်။
ဟို အစားအသောက် မူရင်းရှာတွေ့လို့ လာပြောတာရယ်။
အဲဒါ.. ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲ ခရက်ဒစ်နဲ့တကွ..ပါသွားပြီဖြစ်ကြောင်း..
အဲဒီဆိုင်တွေကို .. ယူအက်စ်ပြန်တွေသွားလှည့်စားကြမယ်ထင်ကြောင်း…
အခု တလော မြင်နေရတဲ့ ဘာသာရေးကို နံပါတ်တွေနဲ့ ကိုယ်စားပြု လှုပ်ရှားတဲ့ ကိစ္စကို အားပေးသူတွေနဲ့ လက်မခံ သူတွေကြားအငြင်းပွားတာတွေတော့ ဘာမှဝင်မပြောပဲနေရာကနေ ဝင်ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာပါတယ်..
ကိုယ့်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လဲ မလုပ်၊ လုပ်တဲ့သူကိုလဲ အပြစ်ပြောတဲ့ လူမျိုးမဖြစ်ချင်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ဘာသာရေး နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်လေးလုပ်စေချင်တယ်..
ပထမဆုံး ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တခြား ဘာသာတွေနဲ့ မတူတဲ့ အချက်က အမျိုးသားရေးနဲ့ ဘာသာရေး ရောလို့မကောင်းတာပဲ..
အမျိုးသားရေးအနေနဲ့ ငါ့လူမျိုး၊ ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့သာသနာ၊ ငါ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး က ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်မမှားပါဘူး….. (အစွန်းရောက်ဖြစ် တာကလွဲလို့ပေါ့).. တိုင်းပြည်ကိုဖွံဖြိုးအာင်လုပ်တဲ့ အချိန်၊ ဘာသာသာသနာကို အရှည်တည်အောင် လောကီပိုင်း ကနေ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီစိတ်တွေ၊ မောင်းနှင်အားတွေ လိုပါတယ်..
ကိုယ့်ထမင်းကို အေးအေးပဲရှာစားမယ် ဆိုတာထက်၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေက တိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်တောင် ကိုယ်မြို့နယ်၊ ရက်ကွက်အတွက်အရေးအကြောင်းဆို အားကိုးရပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ဘာသာရေး (စစ်စစ်) အနေနဲ့ ကျတော့ “ငါ” ဆိုတဲ့ အတ္တစိတ်က ပါယ်သတ်ရမယ့် အရာ၊ တတ်နိုင်သလောက် လျှောရမယ့် အရာဖြစ်ပါတယ်.. သူ့လူမျိုး ငါလူမျိုး မခွဲပဲ မေတ္တာ ထားရမယ့် ဘာသာဖြစ်ပါတယ်.. ငါလူမျိုး၊ ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့ နိုင်ငံဆိုတဲ့ အမျိူးသားရေးမှာ အရေးကြီးတာတွေက ဘာသာရေးမှာတော့ အရေးမကြီးတဲ့ ပညတ် သက်သက်သာဖြစ်သွားပါတယ်..
“ဟာ..အဲဒါတရားတွေ ငါတို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး..ဘုန်းကြီးတွေ လုပ်ရမယ့်အလုပ်၊ ငါတို့ကတော့ ပုထုဇဉ်တွေ.. အဲဒါမျိုးတွေ တွေးမနေ၊လုပ်မနေ နိုင်ဘူး” လို့လုပ်လို့မရပါဘူး.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ လို့ ခံယူကတည်းက လိုက်နာရမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်..
၁၀၀% မလိုက်နာနိုင်တောင် လိုက်နာဖို့တော့ ကြိုးစားနေရမယ့်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်.. “မင်းကော လိုက်နာ နိုင်လို့လား” လို့ မေးရင်လဲ အကုန်တော့ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ဆန်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို တော့ ရှောင်ပါတယ်..
အခု ဖြစ်နေတဲ့ ၉၆၉ ကိစ္စ ကိုပြောရရင် အမျိုးသားရေးလား၊ ဘာသာရေးလား ကွဲစေချင်ပါတယ်.. ၉၆၉ ကိုအားပေးတဲ့သူအချို့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံ ကြည့်ရရင် အမျိုးသားရေး နဲ့ ဘာသာရေးကွဲပုံ မရပဲ ရောထွေးနေပါတယ်.. ၉၆၉ ကို လက်မခံရင် ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ မစစ်တော့သလို၊ ဘုရားဂုဏ်၊တရားဂုဏ် ကိုပဲမလေးစားတော့သလို မျိုးပြောဆိုတာတွေရပါတယ်.. ၉၆၉ ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကြီးဖြစ်သွားသလိုမျိုး ယူဆနေပုံရပါတယ်..
ဖြစ်သင့်တာက အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသွားသင့်ပါတယ်.. ဘာသာရေးကို ဆွဲမထည့်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်.. ၉၆၉ လက်မခံ နိုင်သူတွေ လက်မခံနိုင်ကြတာ ဒီဘာသာရေးရှုထောင့်အရပါ.. ဘာသာရေးကို နံပါတ်တွေနဲ့ ဘောင်ခတ်မခံချင်တာ၊ ဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေမယ့် ဘာသာရေးအဆုံးအမနဲ့ ဆန့်ကျင်တာတွေပါလာတာကိုလက်မခံနိုင်တာပါ..
အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ဒီ ၉၆၉ကိစ္စ ကို တခြားဘာသာဝင်တွေက ကန့်ကွက်တာမဟုတ်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေကိုယ်တိုင်ကိုက မထောက်ခံတာတွေတွေ့နေရတာပါ..
နောက်တစ်ချက်က အမျိုးသားရေးအနေနဲ့ဆိုလဲ အစွန်းမရောက်စေချင်တာပဲ..
အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်ရင် အတက်မြန်သလောက် အကျကြမ်းတာလဲ အခြေခံသမိုင်းလောက်သင်ဘူးရင်ကို သင်ခန်းစာယူလို့ရပါတယ်.. “ငါတို့လုပ်နေတာ ကိုယ်လူမျိုး၊ကိုယ်ဘာသာကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကာကွယ်တာမို့လို့ အစွန်းမရောက်ဘူး” လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လဲရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် ဆိုတာ အစမှာ တက်ကြွဖို ကောင်းသလောက်နောက်ပိုင်းအစွန်းရောက်သွားတက်တာ သတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်..
ဂျာမန်တွေ၊ ဂျပန်တွေရဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဆိုတာလဲ အစပိုင်းမှာတော့ “သူများလူမျိုးတွေကို အစုလိုက်အဲပြုံလိုက်သတ်မဟဲ့၊ နယ်လိုက်ချဲ့ပြီးရမ်းကားမဟဲ့” ဆိုပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး..
နိမ်ကျနေတဲ့ ကိုယ်လူမျိုး၊ကိုယ်နိုင်ငံ အခြေအနေကို ဆွဲတင်မယ့် စိတ်ကိုအခြေခံခဲတာပါ.. နောက်မှ အစွန်းရောက်သွားခဲ့ပြီး ဇာတ်သိမ်းမလှတာမျိုးပါ.. အဲ့ဒါကြောင့်အခုလဲ ကိုယ်လူမျိုးစီးပွားရေး ကြီးပွားရေးကို အားပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုလဲ နောက်တစ်ချိန် ဘာသာခြား၊လူမျိုးခြားတွေ ကိုနှမ်ကွပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တာ၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်လာနိုင်တာ မျိုးတွေစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းပါတယ်..
အဲဒီတော့ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်လဲ ဘာသာရေးနဲ့ သိပ်မနွယ်ပဲ အမျိုးသာရေးအဖြစ် ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်.. တခြားလူမျိုးတစ်မျိုး၊ ဘာသာတစ်ခုခု ကို မုန်းစိတ်၊ ဆန်ကျင်လိုစိတ်ထက်၊ မိမိလူမျိုး၊ဘာသာကောင်းစားရေးအတွက် ဦးတည်ပြီး သန့်ရှင်းစွာလုပ်တယ်ဆိုရင် ကန့်ကွက်မယ်လူသိပ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး..
အခုကိစ္စမှာတော့ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်သလိုဖြစ်နေတာ၊ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေး ပုံစံမျိုးတစ်စွန်းတစ်စ မြင်နေရတာကြောင့် ကန့်ကွက်သူက ကန့်ကွက်နေကြတာပါ.. ဒါပေမယ့် ကန့်ကွက်သူတွေအနေနဲ့လဲ ရှုံချမကောင်းပြောတာထက် ဘာကြောင့်မကြိုက်တယ်၊ ဘာတွေပြင်ဖို့သင့်တယ် ဆိုတာမျိုး Constructive Criticism မျိုးပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အာဏာရှင်စနစ်အလွန် ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းမှာ အခုလိုမျိုး အဖွဲ့လေးတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး၊ ဝါသနာ၊စိတ်ပါဝင်စားမှု တူရာတူရာစု ပြီး လုပ်ကြတာမျိုးတွေ နောက်လဲပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်..
အစပိုင်းဖြစ်လို့ အချိုးမကျတာတွေ၊ စနစ်မကျတာတွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်မရှင်းလင်းတာတွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်.. မပါဝင်ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့လဲ ဘေးထိုင်ဘုပြောမယ့်အစား ကိုယ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာရာကိစ္စဆို ရင် ဝင်အကြံပေး ဆွေးနွေးပေးတာမျိုးတွေလုပ်ရင် ပိုကောင်းမလားတွေးမိပါတယ်..
သူများရေးထားတာ မ လာတာ။
ဒီတစ်ခါတော့ မှတ်ချက် သိပ်မပေးချင်ဘူး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာဘ်စားမှုတွေ၊ အကျင့်ပျက်မှုတွေ ပပျောက်ရင်
ပပျောက်တဲ့နေ့က လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြဿနာတွေပါ ပျောက်တဲ့နေ့ပဲ
ဒီလထုတ်သတင်းစာ ဒေါင်းဖို့ လင့်ပေးပါ
သဂျီးရဲ့ မည်းမည်း သည်သည်း မန်းဒလေး ကျု မှာ မတွေ့လို့
ဒီမိုကရေစီ သွားရာလမ်းတိုင်းမှာ ရှိကိုရှိတဲ့ တွေ့ ကိုတွေ့ ရမယ့် ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ရမယ့်
3.4.2013 ညပိုင်း တန်ဖိုးနည်း ဆင်းကဒ်များကို ၁၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချမည့်ရက် ကို မြန်မာ့အသံမှ ကြော်ညာပြီး သိပ်မကြာမှီ
မြန်မာစံတော်ချိန် 7.45 PM မှ 7.50 PM အတွင်း ဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်သွားပါတော့သည် ။
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည်မှာ လွန်စွာကျေနပ်စရာ ဖြစ်သော်လည်း ၊ ဝယ်ပြီးနောက် သုံးသည့်အခါတွင် ၊ ဖုန်းခေါ်ရခက်ခြင်း ၊ ဖုန်းလိုင်းများလုံးဝပြတ်တောက်ခြင်း ထိုသို့ ပြဿနာများ များစွာ ဖြစ်လာတော့မည် ကို ယခင်ဖုန်းများ ကိုင်နေသောသူများ စိုးရိမ်နေကြသည်မှာ သတင်းဆန်းတစ်ပုဒ်ပင်
မြန်မာတွေ တိဘက် ကနေ ပြောင်းရွှေ့ လာကြတယ် …
ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို …
ကျနော့် ဆရာကြီး ပြောဖူးတယ် …
သူ တိဘက် သွားတုန်းကတဲ့ဗျ …
အဲ့ဒီက အချို့ကလေးတွေ ကိန်းဂဏန်း ရေတွက်ကြတာ မြန်မာတွေလိုပဲတဲ့ ..
” ကျစ် … ညစ် … ဆုံး .. စေး .. ညား …. ” လို့ ရေတွက်ကြသတဲ့ …
ဒါ .. နောက်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ..
အတည် ပြောတာပါ …
ဆရာကြီး ဦးဘသန်း. ၁၉၃၀ ကရေးတဲ့.. ကျောင်းသုံးမြန်မာရာဇဝင် စာအုပ်မှာလည်း.. အဲလို မြန်မာနဲ့ တိဘက် တူနေတဲ့စာလုံးတွေပါတယ်..
အခုလုပ်နေကြတဲ့.. ၀ိပဿနာကျင့်တဲ့နည်းကလည်း.. တိဘက်ဘုန်းကြီးက ပေးသွားတာလို့စာတအုပ်ထဲဖတ်ဖူးတယ်…
အရောင်ရင့် မလာသေးတော့ ဒီမှာပဲ ရေးရတာပ..
လူပြောများနေတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ၁ဂျိန်းခွဲ ဆင်းမ်ကတ် ကိစ္စ ကို
မရေးချင်ဘာဘု။ အဲ့သည့်၂ခုကြားမှာ ငုတ်ကောင်လိုဖြစ်နေတဲ့
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာအကြောင်းဘဲ ရေးချင်ပါတယ်…။သည်လ စထွက်လာကြဘီကိုး။
အသံတွေတော့ ထွက်လာဘီ။ ဟီဟိ.. မဂ္ဂဇင်းကို ဂျာနယ်သတ်တယ်။
ဂျာနယ်ကို သတင်းစာသတ်တယ် ဆိုတဲ့ ခေတ်ရောက်လာသကိုး။
ခက်စ်တာက ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ စ-ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်က Printed media
နေ၀င်ချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်နေတာက ရေချိန်လွဲတာပဲ။
ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်း အရပြောရင်လည်း ထုတ်တဲ့စက်တွေ နဲ့ ဖြန့်ချိရေး ချန်နယ်တွေ
စုတ်ပြတ်သတ်နေတာကိုလည်း မပြင်နိုင်မယ့် အတူတူ ယနေ့ခေတ်နဲ့အညီ
why not broadcasting media? why not SNS? ဆိုတာတွေ စင်းစားကျိမိချင်ရဲ့။
အစိုးရသဒင်းစာ အရှုံးခံထုတ်တာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ သုံးတာ ဝေဖန်သူဝေဖန်။
ဂျာနယ်ကို ထိခိုက်လို့ ကဲ့ရဲ့သူကဲ့ရဲ့ သတင်းစာဆြာ နည်းပါး ၊ အဆင့်မမှီလို့
သတင်းတွေရဲ့ ကွာလတီကို ဝေဖန်သူဝေဖန် မယ့်အစားပေါ့ဗျာ
သတင်းစာ တစောင် ၂၀၀ ကျပ်…
ဟုတ်ကဲ့ ..အင်တာနက် ဆိုင်မှာသွားသုံးလို့ တနာရီ ၄၀၀ ဆို နာရီဝက်ပဲသုံးပယဇီ
နာမည်ကျော် သတင်းဌာန ၄-၅ခုနဲ့ နာမည်ကျော် သတင်းထောက် ၄-၅ယောက်လောက်ကို
ဖ-ဘ ပေါ်မှာပဲဖြစ်စေ follow လုပ်ထားသည်ထားအူး။ ကျနော်တို့ သတင်းစာဝယ်ဖတ်စရာမလိုတဲ့
Multiple Perspective တောင်ရသေးးးး အဟေးဟေး…
ကိုယ်ဖတ်ထားတဲ့ သတင်းကို ကိုယ်တိုင် သုံးသပ်ချက်လေး တောင် ရေးခွင့်ရသေး… အဟေးဟေး…
ကိုယ့်သုံးသက်ချက်ကလေးက ပြောင်မြောက်ရင် ကိုယ့်စားရိပ်နဲ့ကိုယ် ရှဲကြမယ့် ကိုယ့်ကို follow လုပ်ကြမယ့်
ရဲရဲတောက် ပိတ်သတ်တွေတောင် ရနိုင်သေး ..အဟေးဟေး…
…. နယူးစ်ဝိခ်ဆိုတဲ့.. ကမ္ဘာကျော်မဂ္ဂဇင်းကြီး.. ပုံနှိပ်လောကကထွက်ကတည်းက…
ကျုပ်လည်း.. နေ့စဉ်သတင်းစာအတွက်ကြိုးစားထားတာလေး.. လက်လျှော့လိုက်ပေါ့..။
စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ပြီးသွားရင် အဲဒီစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ရေးချင် မန့်ချင်တာ အကျင့်ပါနေတယ်။
ဂျာနယ်တွေဖတ်ပြီးရင် ဘယ်မှာမှ ရေးမရလို့ အားမလိုအားမရ ဖတ်မိတာ အခါခါပဲ။
အစိုးရသတင်းစာတွေကို မဖတ်ဖြစ်တော့တာလည်း ကြာပြီဆိုတော့ကာ…..
ကိုယ်လိုလူတွေများလာရင် ပရင့်မီဒီယာ ကျဆုံးခန်းလည်း ဝေးတော့မယ် မထင်င်င်င်င်င်င်င်င်…… :eee:
ဟု အယ်ဒီတာ့ ဆိုထား စာသား အရ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး တခု ရဲ့ အမည်များ ရှေ့တွင် K, L ပါနေခြင်း အား သိသူများ ရှင်းပြပေးစေလိုပါသည်။ Kဂျာနူး Lခွန်းရီ။
လူမျိုးရေးစစ်မီးများတောက်လောင်ခဲ့ တောက်လောင်နေဆဲ တောက်လောင်ဦးမည့်သဘောတို့မြင်ရပေသည်။ ဆိုရာတွင်
လူမျိုးရေးစစ်မီးများတောက်လောင်ခဲ့ တောက်လောင်နေဆဲ ဟုဆိုခြင်းအား မပြောလိုသော်လည်း တောက်လောင်ဦးမည့်သဘောတို့မြင်ရပေသည် ဟု ရေးသားခြင်း အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသား စေလိုသည်။
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နာမည်တွေရှေ့မှာ K, L တို့ ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေက မျိုးရိုး (မျိုးနွယ်) စာလုံး (Surname) အနေနဲ့ ထည့်တာလို့ ကြားဖူးတာပဲ။
ဘာဖြစ်လို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားခိုင်းတယ်ဆိုတာလေး.. ရှင်ပြနိုင်မလားခင်ဗျား..။
ကျုပ်ကတော့ ဒါကို အချက်အလက်တွေကောက်ပြပြီး.. ရှေ့ကြိုနိမိတ်ဖတ်အနေနဲ့ရေးတာပါ..။
နာမည်ရှေ့မှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးထည့်တာက ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေမှည့်တတ်တာပါ ။ ဘာသာရေးနဲ့တော့မသက်ဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ..ဥပမာ..L လွန်းဝါ ဆိုရင် L က သူရဲ့ မျိုးနွယ်စု ဖြစ်တဲ့ လဇွမ် မျိုးနွယ်စု ။ S ဂွမ်မော်ဆိုရင် သူရဲ့ ဆွမ်းလွတ် မျိုးနွယ်စု ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်…မြန်မာအသံထွက်နဲ့ခေါ်ရခက်လို့ အတိုကောက်အနေနဲ့ နာမည်ရှေ့မှာထည့်တတ်တာမျိုး ပါ ။
အခုလိုမျိုး သေသေချာချာ သိခွင့်ရတာ ၀မ်းသာစရာပဲ။
ဖြစ်နိုင်ရင် တခြားမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အတိုကောက် စာလုံးလေးတွေပါ ရေးပေးရင် ဗဟုသုတရစေတာပေ့ါ။
ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ကိုယ်ကအားရပါးရ မန့်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အရင်မန်ထားတာတွေ ဖတ်မိတော့ ဘေးက မိုင်းနက်(အနုတ်တွေ) လည်းစီကာမြင်ရော မန့်ရမယ်ဖီလင်တွေလည်း လစ်လစ်သွားတယ် သူဂျီးမင်းရယ်။
အဲဒါတွေက.. ကိုယ့်ကော်မန့်ကို တယောက်ယောက်ကသေသေချာချာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့.. အသိအမှတ်ပြုအထောက်အထားလို့မှတ်ပါ.. ဦးကြီးခင်ခရယ်..
သူတို့ခမြာ.. အချိန်ပေးရတယ် မဟုတ်လား..။
သဂျီးလေဖောတာကို ကျုပ်အနေနဲ့ လက်တွေ့ဆန်ဆန် မှတ်ချက်ပေးမယ်။ ကာလံ ဒေသံ ပယောဂံဆိုတာ ရှိသဗျ။ မြန်မာပြည် ဘယ်ဒေသမှာရှိသလဲ.. ဘေးပတ်လည်မှာ ကူမြူနစ်တရုတ် ဟိန္ဒူအိန္ဒိယ မွတ်စလင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တို့ရှိတယ်။ အသင်းဝင်ထားတဲ့ အာဆီယံမှာဆိုလည်း မွတ်စလင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန် နိုင်ငံတွေရှိတယ်။ လစ်ဘရယ်နိုင်ငံ တခုမှ မတွေ့ရဘူး။ အာရှတိုက်အနေနဲ့ ဘာသာရေးအစွဲနည်းတဲ့ လစ်ဘရယ်တိုင်းပြည် အတော်ရှားတယ်။ ပြောဂျေးဆို ဂျပန်လောက်ပဲ ရှိမယ်နဲ့တူတယ်။ အဲလိုဒေသမျိုးမှာ သဂျီးလိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါက ဒေသရှုဒေါင့်က……. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လို စစ်ပွဲဂျီးတပွဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ပထဝီဝင် နိုင်ငံရေးအနေအထား ဟန်ချက်တွေ ပျက်ကုန်ရင်တော့ ဖြစ်ကောင်းပါရဲ့။ ဒါက ကာလရှုဒေါင့်…
ပယောဂံ အနေနဲ့ကတော့ ပြင်ပစွက်ဖက်မှု ဆိုဂျပါစို့ဗျာ.. ကိုယ့်ပြည်တွင်းနဲ့ဆို မိရိုးဖလာ အစဉ်အလာပဲ ဆက်သွားနေမယ်၊ ပြင်ပဝင်လာရင် ဘာသာတွေ ဒီထက်ပိုရောယှက်ကုန်မလား၊ ဘာသာရေးကွယ်ပျောက်ကုန်မလား… လက်ရှိအနေအထား အရကတော့ ဘာသာတွေ ပိုအားပြိုင်လာဖို့များတယ်။
ကိုယ့်တဘက်ထဲ လစ်ဘရယ်ကျပြ ဖွင့်ချလိုက်ပြီး သူများက လိုက်မလာရင် ခေါင်းပေါ်တက် အနင်းခံရမှာ သေချာပေါက်ပဲ။ ခန္ဓီသီးခံခြင်းတို့ မေတ္တာတရား တို့ဆိုတာ ကျင့်စဉ်တခုလို အဆုံးထိသွားမှ ထိရောက်တယ်၊ အန်ဂျီအို အလှူပေးသလို တို့ထိတို့ထိ မရဘူး။ အဲသလိုဆို ဘာသာဝါဒလူမျိုး အားလုံးက တညီတညွှတ်ထဲ သဘောပေါက် လက်ခံကြပြီလား။ ဖြစ်နိုင်ဖို့ရော နည်းလမ်းရှိလား…။
ယူအက်စ်က ပထမကမ္ဘာစစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွေအပြီးမှာ (ကာလံ) မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို လူမှုရေး အတွေးအခေါ် ပြောင်းသွားတာ။ သူ့ဘေးပတ်လည်မှာ ဘာသာတူ၊ လူမျိုးတူ နိုင်ငံတွေချည်းပဲ (ဒေသံ)၊ သူကိုယ်တိုင်ကိုက ကမ္ဘာကြီး အကောင်းအဆိုး၊ နည်းပညာ အတက်အကျ ဖန်ဆင်းနေတာ (ပယောဂံ) ကာလံ ဒေသံ ပယောဂံနော်… သုံးခုချိန်စဉ်းစား…
လစ်ဘရယ်အယူ မနှိုးဆော်ရမဟုတ် နှိုးဆော်ရမယ်၊ အားပေးရမယ် သို့သော် ကိုယ်နိုင်တာထက်လွန်ပြီး တိုင်းပြည်ဂျီး ပြုပြင်ရမယ် သွားမလုပ်နဲ့…. ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်သိ…။
မြန်မာပြည်ရဲ့.. ၂၀၁၅ အခြေအနေကိုမှန်းမိအောင်ပြန်တင်လိုက်တာပါ..
ဒါတွေဒါတွေမလုပ်ရင်.. တိုင်းပြည်အခြေအနေ..သိပ်မကောင်း… လို့..